Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mr. Scot Alan Marciel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of the Union of Myanmar in succession to H.E. Mr. Derek J. Mitchell – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mr. Scot Alan Marciel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of the Union of Myanmar in succession to H.E. Mr. Derek J. Mitchell
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mr. Scot Alan Marciel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of the Union of Myanmar in succession to H.E. Mr. Derek J. Mitchell.
Mr. Scot Alan Marciel joined the U.S. State Department in 1985. He served in various capacities at the U.S. Embassies and Consulates General in the Philippines, Brazil, Thailand, Vietnam, Hong Kong and Turkey as well as in the State Department in Washington, D.C. He served as Deputy Assistant Secretary and U.S. Ambassador for ASEAN Affairs in the U.S. State Department’s Bureau of East Asia and Pacific Affairs from 2007 to 2010. Mr. Scot Alan Marciel also served as the U.S. Ambassador to Indonesia from 2010 to 2013. Since August 2013, Mr. Scot Alan Marciel has been serving as Principal Deputy Assistant Secretary of the U.S. State Department’s Bureau of East Asia and Pacific Affairs.
He is fluent in Indonesian, Vietnamese and Portuguese languages. He is married and has two daughters.
Dated: 16th February 2016.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သံအမတ်ကြီးအဖြစ် လက်ရှိ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒဲရစ် ဂျေ မစ်ချဲလ် ၏ နေရာတွင် မစ္စတာ စကော့ အလန် မာရှယ်အား ခန့်အပ်ရန် အမေရိကန်အစိုးရမှ အဆိုပြုလာခြင်းကို သဘောတူညီပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ စကော့ အလန် မာရှယ်သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက် အမှုထမ်းခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘရာဇီးလ်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ဟောင်ကောင်နှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများနှင့် ဝါရှင်တန်မြို့ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာဗျူရိုတွင် ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် အာဆီယံရေးရာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ စကော့ အလန် မာရှယ်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ ယနေ့အထိ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာဗျူရိုတွင် အကြီးတန်း ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
မစ္စတာ စကော့ အလန် မာရှယ်သည် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ပေါ်တူဂီ ဘာသာစကားတို့ကို တတ်ကျွမ်းပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သမီး (၂)ဦး ထွန်းကားပါသည်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်